Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.Is e- "esandleni ucheba kwaye yokusonga umatshini", Nantong hai 'an libao ezikhethekileyo kwimveliso kumatshini kuchetywa, ayeguqa umatshini, umatshini lothuli, intsimbi umatshini kuchetywa (bar umatshini kuchetywa), umatshini ngamanzi, uncoiling umgca sokulinganisa. series Le nkampani ngayo iimveliso, isakhiwo indawo, ngqo phezulu, kulula ukuba ukusebenza, umsebenzi oluzinzileyo, ekhuselekileyo kunye oluthembekileyo, ezisetyenziswa kakhulu nomnombo sentsimbi, iimoto moya, iinqanawa, umthamo, lezixhobo, iimveliso intsimbi engatyiwa kunye namanye amashishini.
Le nkampani iye a anamandla zobugcisa kunye nezixhobo processing ophezulu, imveliso kunye nokuvavanyelwa izixhobo ngokupheleleyo, iimveliso usebenzisa imveliso imigangatho yesizwe. Kule minyaka, iye babenikelwe yacaca uphando isixhobo umatshini kunye nophuhliso, iindidi zemveliso oversize wazalwa apha, phambili efanayo shishino. Ngesanti kubunzulu baphantsi umatshini kuchetywa, ayeguqa umatshini, lo Ukufakelwa kobuchwepheshe German, uyilo kunye nokuveliswa ahambise umatshini jikelele Ukufakelwa kobuchwepheshe Japanese, ukusebenza umatshini yonke ifikelele kumgangatho ophezulu ngamazwe, kwiminyaka yakutshanje, inkampani liphuhlise uthotho iimveliso CNC, yethu iimveliso athengise kakuhle kulo lonke eli lizwe kuthunyelwe kakuhle ukuya ngasempumalanga Asia, eYurophu nase-United States kunye noMbindi Mpuma, kudala amukeleke indumiso noosomashishini basekhaya angaphandle ngayo.
Siyakwamkela ngokunyanisekileyo ulwalathiso ngomonakalo ukukhanya angaphandle kunye zasekhaya zorhwebo ezintlanu, ngokupheleleyo uphuhliso isifundo, siya ngokukodwa ikhuphe imveliso phawu ophezulu kunye nenkonzo. Masithi ngaye sinyuse ngamaxesha ukhuko ngokunyanisekileyo kunye, mabasibambe iwonga, uwave "umgangatho wokuqala, umthengi kwilixa" ukukhulisa mfanekiso, uthabathe umdala imilo kwangaphambili, mzalwana uphuhliso eqhelekileyo. Enye intsebenziswano, umhlobo obungunaphakade!